CS: GO ANAGHỊ AMALITE NA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Idozi nsogbu na mmalite nke CS: Gaa na Windows 10
Kuki bụ ọnụọgụ data ndị saịtị ahụ na-ahapụ na ndekọ profaịlụ nchọgharị. Site n'enyemaka ha, akụ weebụ nwere ike ịmata onye ọrụ. Nke a dị mkpa karịsịa na saịtị ndị ahụ chọrọ ikike. Ma, n'aka nke ọzọ, nkwado nke gụnyere maka kuki na ihe nchọgharị ahụ na-ebelata nzuzo onye ọrụ ahụ. Ya mere, dabere na mkpa ndị dị mkpa, ndị ọrụ nwere ike gbanyụọ ma ọ bụ gbanyụọ kuki na saịtị dị iche iche. Ka anyị chọpụta otu esi eme kuki na Opera.
Site na ndabara, enwere ike kuki, ma ha nwere ike ịme nkwarụ n'ihi ọdịda usoro, n'ihi ọrụ njirimara na-ezighị ezi, ma ọ bụ nwee nkwarụ nwere nkwarụ iji nọgide na nzuzo. Iji mee kuki, gaa na mwube ihe nchọgharị. Iji mee nke a, kpọọ menu site na ịpị Opera logo na akuku aka ekpe nke windo ahụ. Ọzọ, gaa "Ntọala". Ma ọ bụ, pịnye ụzọ mkpirisi keyboard na keyboard Alt P.
N'otu oge na ngalaba ntọala nke nchọgharị, gaa na mpaghara "Nche".
Anyị na-achọ igbe nkwụnye kuki. Ọ bụrụ na agbanwụrụ mgbanwe ahụ ka "Chebe saịtị ahụ site na ịchekwa data na mpaghara", nke a pụtara na kuki enweghị nkwarụ. Ya mere, ọbụna n'ime otu nnọkọ ahụ, mgbe usoro ikike ahụ gasịrị, onye ọrụ ahụ ga - agbapụ "site na saịtị ndị chọrọ ndebanye aha.
Iji mee ka kuki, ịkwesịrị ịtọọ ọkụ ọkụ ka ị "Chekwaa data mpaghara ruo mgbe ịpụpụrụ nchọgharị" ma ọ bụ "Kwe ka nchekwa data mpaghara."
N'okwu mbụ, ihe nchọgharị ahụ ga-echekwa kuki naanị ruo mgbe arụchara ọrụ ahụ. Nke ahụ bụ, mgbe ị malite Opera, kuki nke nnọkọ gara aga agaghị azọpụta, saịtị ahụ agakwaghị "echeta" onye ọrụ ahụ.
N'okwu nke abụọ, nke a na-edozi na ndabara, a ga-echekwa kuki oge niile ọ gwụla ma ha debeghachi. Ya mere, saịtị ahụ ga-echeta "onye ọrụ" mgbe nile, nke ga-eme ka usoro ikike ahụ dị ukwuu. N'ọtụtụ ọnọdụ, ọ ga-agba ọsọ na-akpaghị aka.
Na-anabata kuki maka saịtị ọ bụla
Tụkwasị na nke a, ọ ga-ekwe omume iji kuki maka saịtị ọ bụla, ọbụlagodi na nchekwa ụwa zuru ezu. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ "Jikwaa nnwale" nke dị na ala nke igbe igbe kuki ahụ.
Ụdị na-emepe ebe adreesị nke saịtị ndị onye ọrụ chọrọ ịchekwa kuki abanyela. N'akụkụ aka nri, na - eche ihu na adreesị saịtị ahụ, anyị na - eme ka mgbanwe ahụ gaa na "Nyekwa" ọnọdụ (ọ bụrụ na anyị chọrọ ka nchọgharị ahụ nọgide na-enwe kuki na saịtị a), ma ọ bụ "Kpochapụ ụzọ" (ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka kuki kuki na oge ọ bụla). Mgbe ịmechara ntọala ndị a, pịa bọtịnụ "Mechara."
Ya mere, a ga-echekwa kuki nke saịtị abanye na ụdị a, a ga-egbochikwa ihe onwunwe weebụ ndị ọzọ niile, dịka e gosiri na ntọala izugbe nke nchọgharị Opera.
Dịka ị pụrụ ịhụ, njikwa nke kuki na Opera nchọgharị bụ nnọọ mgbanwe. Jiri ngwá ọrụ a n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ị nwere ike ịchọta oke nzuzo na saịtị ụfọdụ, ma nwee ikike iji nyefee ikikere ngwa weebụ.